Agaasimaha Cayaaraha Man City Muxuu Ka Yiri Hadii Ay Fursad U Haystaan Inay Barca Ka Afduubtaan Messi %
Inkastoo Manchester City ay leedahay awood dhaqaale oo ay ku qarash-gareyn karto Malaayiin Yuuroo hal suuqa oo kaliya, ayaa agaasimahooda cayaaraha ninka lagu magacaabo Ferran Soriano, uu sheegay in meesha aysan ku jirin Lionel Messi.
Kooxda Sky Blues, ayaa waxaa si weyn loo hadalhayaa inay Barcelona, kasoo afduubaneyso Leo, islamarkaana ay u qabto xiiso waali ah, laakiin warkaan kasoo yeeray masuulkaan ka tirsan wuxuu ku yahay jamaahiirtooda niyad jab weyn.
Ferran Soriano, oo sidoo kale soo ahaa Madaxweyne ku xigeenka dhanka dhaqaalaha ee Barcelona intii udhaxeysay 2003 iyo 2008, ayaa sheegay in kabtanka xulka qaranka Argentina, ee 30-sano jirka ah uu ku raaxeysanayo nolasha caasimada Catalonia.
“Ma jiraan wax fursad ah, oo aan kula soo saxiixan karno [Lionel] Messi,” ayuu ugu sheegay Ferran Soriano, dhowr xarumo warbaahineed shir jaraa’id, kaasoo uu ku qabtay Magaalada Buenos Aires, ee caasimada dalka Argentina.
“Waan ka war-qabaa isaga iyo qoyskiisa, si wanaagsan ayay ugu fiican yihiin Barcelona, waana halka ay ubaahan yihiin inay sii joogaa,” ayuu sii daba dhigay.
“Waxaan nahay kuwa aan isaga ka akdhawaan doonin, waana mid ay adag tahay inaan helno, maxaa yeelay waa ciyaaryahanka taariikhda oo dhan ugu fiican, waan halyeey wax walba bedalay,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
BarcelonaFerran SorianoLionel MessiMan City
Shaxda Rasmiga Ah Man Utd vs Sevilla Oo La Shaaciyay – Yay Kusoo Bilaabeen Garoonka 2 Macalin?